June 2021 – Grab Love Story
by phyu June 30, 2021 0
ကောင်မလေးက အသည်းအသန် အော်ဟစ်နေပေမယ့် လုံးဝညှာတာမှုမရှိပဲ တလစပ် ထိုးသွင်းနေတာကိုကြည့်နေရင်း ကောင်မလေး နေရာဝင်ပြီး အလိုးခံချင်တဲ့စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာပါတယ်
အားးးး ကို အမလေးးးးးးအားးး ကျိမ်းပြီး အီစိမ့်သွားတာပဲ အားလားး” ကောင်းလား”အင်းကောင်းတယ် နာလည်းနာတယ် တအားမလုပ်နဲ့အုံးနော် ဘာကြီးထည့်လိုက်တာ” အာ့တေမေးမနေနဲ့” စကားဖြတ်ပြီး ဝင်ပြီးသားလီးကိုပြန်ဆွဲထုတ်တော့ မနဲဆွဲရတယ် သားရည်ဖုတွေက စောက်ပတ်နံရံတွေနဲ့ ထစ်ထစ်နေတာကြောင့်ပ
မဖြူ စားပွဲပေါ် တက်လိုက် ဟုတ် ..ဟုတ်… စည်ပင် ထမိန်ကို မတင် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဆွဲ ချွတ်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ပြီး မဖြူ၏ စဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို လျှာဖျားနှင့် ယက်ပေးလိုက်သည် အတွေ့ကျုံ ရှိပေမယ့် ယခုလိုမိမိစဖုတ်အား ခုပြောခုယက်
ကျနော့်လီးပေါ်ကဆပ်ပြာရည်တွေရေလောင်း ဆေးပေးတယ် ရေကအေးတော့ တောင်နေတာလျှော့သွားတယ် ကျနော့်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေ ဖာသည်မကိုခေါ်ပြီးမှုတ်ခိုင်းဖူးတယ်
အပျိုလေးကို စိတ်လှုပ်ရှားအောင် ကျွန်တော်တမင်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက် ပေါင်တစ်ဖက်ပြောင်းသောအခါ သူ့ကိုယ်မှာ ကျွန်တော့် ပေါ် တော်တော် ရောက်လာပါသည်။ ကျွန်တော်က နောက်ကျောကို အသာကိုင်ကြည့်လိုက်ပြီး လက်ခြောင်း ၃ ခြောင်းဖြင့် နှိပ်ပေးသလိုလုပ်လိုက်သည်
အတွင်းခံရင်စည်းသဘက်ကို မ၀တ်ခဲ့သည်မို. ၀ိုင်းစက်အိမို.နေသော ခင်ဖုဏ်း၏ရင်သားနှစ်ဖက်မှ ဗလာကျင်းခဲ.ရပြီတည်း…. တာဝန်သည် တာဝန်သာဖြစ်သည်။ ယခုကိစ်္စသည်ကား သွေးသားကိစ်္စ… ရဲမက်သည် ခင်ဖုဏ်း၏ရွှေရင်အစုံကို နယ်ကာ လှိမ့်ကာဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေ၏။
အာ ကိုကြီး ကလည်း ဘာတွေလိုက်ကိုင်နေတာလည်း လွတ်ပါ………ခေး ကလည်းချစ်လို့ပါ……ခေး နို့လေးတွေကတင်းနေတာပဲ ခဏလောက် စို့ကြည့်မယ်နော်…အာ ရှက်စရာကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေတာလည်း လွတ်ပါ…… အင်္ကျီကိုအသာမပြီးအတင်းစို့ ပြစ်လိုက်တော့ မျက်လုံးလေးကိုစင်းနေတာပဲ ကောင်းနေတာလေ
အထူးသဖြင့် ပုခုံးကျယ်ကျယ်နှင့် စူထွက်နေသော နိူ့အုံနှစ်ဖက် . သေးကျဉ်သော ခါးလေးအောက် ကော့ထွက်ဝိုင်းစက်နေသော ဖင်ကြီးမှာ မြင်သည့်ယောင်္ကျားတိုင်း လည်ပြန်ငေးကြည့်တတ်၏။ နွယ်ဝတီမှာ ယောင်္ကျားတိုင်း မရောတတ်ပေမယ့် သူမအိမ်ဝင်ထွက်နေသော ဇော်သူ့အား မောင်ငယ်တစ်ယောက်လို ခင်မင်ခဲ့သည်
by phyu June 27, 2021 0
ယခု ကျွန်မ ပေါင် နှစ်ဖက် ကို ကား ဆောင့်ကျောင့်ထိုင် တင်ကလေး နောက်ပစ် အနေအထား ဖြစ်နေသည် ။ ကျွန်မ ရဲ့ နို့အုံ နှစ်ဖက် ကို တင်းကျပ်အောင် ကြိုး ဖြင့် တုတ်ထားပြီး နို့သီးခေါင်းလေး နှစ်ဖက် ကို သံကလစ် နဲ့ အညှပ်ခံထား ရတယ်
ကေသီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တာယာ့ကိုယ်လုံးကြီးက ကုတင်ပေါ်တွင် ခါးကိုကိုင်းကိုင်းပြီး ဆောင့်ဆောင့်ချနေလေသည်။ နောင်ရိုးက ကေသီ့အင်္ကျီကိုဆွဲလှန်ကာ နို့တစ်လုံးကိုဖမ်းစို့ရင်း ညာဘက်လက်က ခပ်သွက်သွက် အဖုတ်ထဲသို့အထုတ်အသွင်းလုပ်တော့သည်